Ampio izahay - Medical Aid International
Mamonjy aina ny fanodinam-bokatra mahomby
Faly izahay fa mamaky an'ity ianao, satria antenaina fa mety hanana fitaovana enti-manome ianao ho anay! Na izany aza, indraindray dia mandefa zavatra tsy misy ilana azy izahay ary mitaky vola amidy anay izany, noho izany dia nametraka torolàlana vitsivitsy ho anao izahay.
Manana fahaizana an-taonany maro izahay amin'ny famolavolana sy fampitaovana ny teatra fiasa, hopitaly ary tobim-pitsaboana any amin'ny tany an-dalam-pandrosoana. Manome fitaovana mifanaraka amin'ny zava-misy sy ny asany isika, ohatra. Voltages mety, hafanana sy mahatohitra hamandoana, matanjaka, back-up bateria raha azo atao, natao ho an'ny neonates sy fikarakarana zaza ary fanesorana ireo kojakoja fampiasana tokana. Mampiroborobo ny fanao tsara indrindra izany ary mampihena ny tsy fetezana sy ny fahatapahana.
Manome sanda tsara izahay amin'ny karazana fitaovana sy kojakoja fandidiana amin'ny alàlan'ny fampiasana sourcing hendry. Amin'ny alàlan'ny tambajotran'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria dia afaka manome fitaovana vaovao mifaninana amin'ny vidiny mifanentana izahay, miaraka amin'ny fampitaovana taloha sy fitaovana fanodinana.
Miara-miasa amin'ny mpamatsy fahasalamana isan-karazany izahay any Angletera mba hamatsy kojakoja efa ananana. Ny fitaovana talohan'ny fananana rehetra dia solo-servisy tanteraka ary nomanin'ny ekipanay injeniera biomedika alohan'ny fandefasana azy, ary omena fitsitsiana sy boky torolàlana.
Manana teti-bola ho an'ny andraikitra ara-tsosialy ve ianao? Raha izany dia miresaka aminay fa manana tetik'asa maro azonao tohanana izahay
Sintomy ny torolàlana momba ny fanomezana anay amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra etsy ambany.
Manokana izahay amin’ny famolavolana teti-bola araka izay tratrany, mba hampitomboana ny fiatraikany amin’ny famatsiana ara-pahasalamana. Izahay dia manao izany amin’ny alàlan’ny fampisehoana vaovao, fampisehoana taloha, fitaovana efa fananana mialoha ary famatsian-tsakafo azo tsindraindray.
Zava-dehibe ny fampitaovana rehetra alefantsika ho an’ny tontolo iainana izay hitondrany fahasamihafana maharitra sy maharitra amin’ny fitsinjaram-pitsaboana any amin’ny Firenena ambany miditra.
Eo am-pitandremana hatrany isika:
Vilia baolina, vilia baolina, lovia voa Vakinankaratra firaka Fitaovana herinaratra orthopedic
tehina Fandriana fandinihana manual Trolley marary
Defibrillators Latabatra sy firaketana amin'ny tanana Fitaovana fitsaboana ara-pahasalamana
Diathermy mikraoskaopy Laryngoscope azo ampiasaina
Fitaovana vonjy taitra Latabatra fomba fanao madinidinika Laryngoscope azo ampiasaina
Fanadinana sy jiro miasa amin'ny finday sy valindrihana (LED) Masinina taratra X-finday Sheets / bodofotsy
Fitaovana fandidiana GP mpanaramaso Suction
Latabatra fanadinana gymnae / fiterahana Entana mpitsabo Fanampiana fiofanana toy ny manikins
Fanamafisana ny sary Fitaovana fitsaboana amin'ny asa Ultrasounds
fitaovana Fanaka fanaovana teatra miasa Fanaka ao amin'ny paroasy
IV mijoro Takelaka / visy / fametahana ivelany Palitao taratra X
Azafady azafady fa tsy afaka mandray ireto manaraka ireto izahay:
Entana lany daty
Fampiasana tokana (kitapo IE AMBU, laryngoscope tokana ampiasaina, syringes, canula IV)
Kiraro orthopedic, braces
Catheters, akanjo, kitapo colostomy
Amin'ny ankapobeny dia tsy mihinana entana lafo vidy isika na dia misy maningana aza ny fanjairana sy ny fofon'aina fanadontoana, raha mbola amin'ny daty
Raha mpamatsy lehibe manana tahiry avo be ianao hanary, mifandraisa.